Biography of odadewabo ababili baseMelika - odade uMary Kate no-Ashley Olsen
Biography odadewethu u-Olsen.
Odade Olsen - amawele amabili adumile, abadlali be-cinema yaseMelika, abaqala ukunyuka kwabo eHollywood Olympus eneminyaka eyisishiyagalolunye.
Okuncane mayelana nomndeni wabantu abadumile
UMary Kate no-Ashley bazalwa ngoJuni 13, 1986 ngaphansi kwesibonakaliso sikaGemini. Izwe lakubo idolobha laseCalifornia, eliseduze naseLos Angeles - i-Sherman Oaks. Ubaba wabo uDavid wasebenza njengebhange, kanti uMama Jarnett wayengumphathi. Amaqhawe esihlokwana sethu anomfowethu omdala nodade osemncane. Ngo-1995, abazali babo bahlukanisa, futhi emshadweni olandelayo, uyise ka-Olsen wayenabantwana ababili.
Naphezu kokufana okuphawulekayo, u-Ashley noMary Kate bangamawele angama-dizygotic, okungukuthi, anama-genetic ehlukene. Ngaphezu kwalokho, u-Ashley ubhala ngesandla sakhe sesobunxele, ngokungafani nodadewabo, nokuphakama kwakhe okungaphezu kuka-3 cm.
Indlela eya empumelelweni
Lapho odade bebaneminyaka eyisithupha kuphela ubudala, umama wabaholela ekuhloleni ukukhipha ucingo kwichungechunge lwe-TV "I-Full House". Kwenzeke ukuthi phakathi kwazo zonke ezinye izingane amantombazane ayenawo kuphela angazange akhale, ngenxa yalesi sizathu akhethwe ukuba abe nendima, aqala ukusebenza eneminyaka eyi-9.
Ngesikhathi ukudubula kwenkathi yokuqala kuphelile, abazali bafuna ukuyeka ukuqhubeka kwenkontileka, kodwa bashintsha izingqondo zabo ngemuva kokuba abakhiqizi bekhulise inani lemali.
Lesi sitcom esiphelele sinezinkathi ezingu-8 futhi saboniswa ku-ABC iminyaka eminingana, kusukela ngo-1987. Kuyaphawuleka ukuthi ngonyaka wokuqala womsebenzi, odadewabo baka-Olsen bavele emalinikishini njengomuntu oyedwa - uMary Keith Ashley, njengoba abakhiqizi befuna ukugcina imfihlo yokuthi indima idlalwe amawele.
Nokho, emva kwefilimu ka-1992 ethi "Fihla Ugogo, Siza", kwaziwa umphakathi ukuthi uMary Kate no-Ashley bangabantwana ababili abahlukene. Ngemuva impumelelo enkulu yochungechunge ethi "Indlu Egcwele" odade baba izinkanyezi ze-cinema yaseMelika.
Ngo-1995, kukhishwe umsebenzi omusha wama-actress - i-movie ethi "Two: Mina no-My Shadow". Umbukiso wakhe kumabhayisikobho wezwe kwaba ukwehluleka, kodwa ngemuva kokuthengiswa kwamavidiyo, le filimu yaba i-bestseller yangempela.
Odade Olsen babhekwa njengabakhiqizi abancane kunazo zonke kulo lonke lemboni ye-American ifilimu, ngoba ngisho nangeneminyaka engu-7 baba ngabanikazi be-Dualstar yenkampani.
Ngo-2002, amagama kaMary Kate no-Ashley atholakala kumagazini iForbes phakathi kohlu lwabantu abangu-100 abadumile. Kusukela ngo-2007, abadlali bezenzo zithatha indawo yabo phakathi kwabantu abacebile kakhulu emhlabeni wokuzijabulisa, inzuzo yabo ifinyelela ku-dollar ayizigidi eziyikhulu.
Odade badala imigqa eminingana yokugqoka: izingane nabantwana abasha, izingubo eziphezulu, kanye nomkhakha osemusha wabalaleli abaningi.
Ama-actress abe nobuhlobo obuhle nehlangano ekhuthaza amalungelo esilwane. Lokhu kungenxa yokusetshenziswa okubanzi kwamafru nesikhumba sangempela ekugqokeni kweminye yemikhiqizo yazo.
UMary Kate Olsen ubhekwa njengomklami wezambatho, kodwa isifiso sakhe sokubukeka sincane sasiholela ekutheni ngo-2004, umlingisi waphathwa nge-anorexia.
Idumela lathandana lakhe liphinde lonakaliswa yihlazo eliphathelene nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Ngonyaka ka-2006, u-Ashley wabeka icala ngokumelene nencwadi eyaziwayo eyathumela isithombe sakhe ngamakhulu eminyaka avaliwe, lapho umphakathi futhi waphetha khona mayelana nenkanyezi yokulutha izidakamizwa. I-suit yezigidi ezingu-40 yatholwa ngumdlali we-actress.
Ngokuqondene nobuhlobo bobuhlobo, odade bakhetha ukungahlakuleli lesi sihloko, ukugcina yonke imininingwane yomuntu eyimfihlo. Kodwa-ke, lo mshini ucacisa njalo ngezikhathi zawo. Ngokwesibonelo, u-Ashley Olsen uthandana noJared Leto, kanye noLance Armstrong, umdlali webhayisikili owayesekhulile kunomdlali we-actress.
UMary Keith wabonakala ebuhlotsheni noNate LOUMAN, umdwebi, kanye no-Olivier Sarkozy, umfowabo womongameli waseFrance.
UPablo Picasso, i-biography emfushane
UMaksim: Ngizorekhoda i-albhamu yesithathu bese ngishiya esiteji
Ukuphothula iziqu enkulisa - imibono ezithakazelisayo nezikripthi
Ukusebenza kwe-acupuncture ku-cosmetology
I-Chilli, amantongomane ne-sweet pepper sauce
I-Zucchini e-batter epanini lokuthosa nase-oven - zokupheka nge-garlic, inyama, imayonnaise
7 amathiphu omama abayeni babo abaguquka
Imibono yezikhathi zothando
Ukunakekelwa kwezinwele ngesikhathi sokukhulelwa
Amamodeli kanye nosayizi bafuna izithombehop futhi bathole okuncane kakhulu